Mpianatra eny amin’ny anjerimantolo
Befotaka Atsimo Olona 113 matin’ny tazomoka sy fivalanana
Olona miisa 113 no naomy ny ainy tany Befotaka Atsimo noho ny tazomoka sy ny fivalanana tao anatin’ny iray volana, raha ny tatitra nataon’ny solombavambahoaka avy any an-toerana.
FI.TRA.MA Misy misoloky sahady ny fanafody vokariny
Misy misoloky sahady ny fanafody vita avy amin’ny zava-maniry vokarin’ny Fitsaboana Tradisionela Malagasy na ny FI.TRA.MA raha araka ny tafa nataon-dRafanomezantsoa Jean Nirina filohany tamin’ny mpanao gazety.
CHU Anosiala Tsy mandray afa-tsy ireo tena marary mafy
Nanao fampahafantarana ny Hopitaly CHU Anosiala fa tsy afa-mandray afa-tsy ireo tranga voamarina fa tratry ny covid-19 sy ireo ahiana ho voa mampiseho soritraretina mafy na “forme sévère ou critique”.
Orinasa Pharmalagasy Mpandraharaha avy eto avokoa no miasa ao
Orinasa Malagasy hamokatra ny fanafody eto Madagasikara ny Pharmalagasy ary mpandraharaha Malagasy avokoa no miasa ao.
Mpianatra mpitsabo – HJRA Tsy hiasa raha tsy mivaly ny fitakiana
Nitokona ireo mpianatra taona faha-7 sy faha-8 izay efa mandray an-tànana ny marary sy miasa ao amin’ny Hopitaly HJRA Ampefiloha omaly.
Pharmalagasy Am-pikarohana ireo mpiasa ambony
Eo am-pikarohana ireo mpiasa ambony na ireo izay ho mpitantana ny ozinina goavana mpamokatra fanafody vaovao, Pharmalagasy, ankehitriny ny fitondram-panjakana, raha ny fampitam-baovao voaray hatreto.
Tazomoka any Iakora Nahitam-bokany ny paikady nampiasaina
Nahitam-bokany ny ady amin’ny tazomoka any amin’ny distrikan’i Iakora. Nanomboka ny volana mey lasa teo mantsy dia maro ireo ezaka sy paikady
sy mankasitraka ny hanohizana ny fampianarana "en ligne"
Tsy maintsy hatao en ligne ny fanohizana ny fampianarana eny amin’ny anjerimanontolo raha araka ny fanapahan-kevitra tapaka tao anatin’ny fivorian’ny COPRIES. Ireo mpianatra efa mamaramparana ny taom-pianarana no voakasin’izany izay marihina fa efa lasa nody any amin’ny faritra sy any ambanivohitra namonjy ny Ray aman-dReniny avokoa ny ankamaroany noho ny fiparitahan’ny tsimokaretina coronavirus. Manoloana io tranga io dia nivoaka tamin’ny fahanginana ny fikambanan’ireo mpianatra avy amin’ny faritra 22 ka nambaran’izy ireo tamin’izany fa tsy mety io fanapahan-kevitra noraisin’ny COPRIES io. Tsy mitovy mantsy ny fari-piainan’ny tsirairay avy amin’ny fananana connexion handraisana ny laza adina sy ny hanaovana ny devoara hoy izy ireo izay mitaky e mail. Ho an’ny sasany hoy hatrany izy ireo na dia ny trano fonenany aza any amin’ny toerana mbola tsy misy jiro, ny finday hampiasainy mbola foza, hany ka lasa tsy mitovy zo amin’ny fahazoan’ny mpianatra fahalalana feno. Mangataka amin’ny fanjakana ny amin’ny tokony hanohizana ny fampianarana toy ny teo aloha ihany izy ireo araka izany saingy manaja sy manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra kosa toy ny fanaovana aron-tava, ny fanajana ilay 1 metatra, ny fanasan-tanana amin’ny savony mialohan’ny hidirana sy hivoahana ny efitrano fianarana…. Tsiahivina moa fa mbola ny 13 %-n’ny tokantrano Malagasy hatreto no manana connexion raha miaina amin’ny fampiasana finday avokoa ny ambiny.